လက်ကိုင်ကိုင်ထားသောစက္ကူလက်ဆောင်အိတ်များ - အနည်းဆုံးမှာယူနိုင်သောပမာဏ - ၁၀၀၀ အပိုင်း (ပစ္စည်းအပေါ် အခြေခံ၍ လက်မှုလက်ရာ၊ အရေအတွက်အညွှန်း၊ အမြောက်အများနှင့်စျေးနှုန်းကောင်းပါသည်) ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ဝယ်လိုအားအပေါ် မူတည်၍ အခမဲ့ဒီဇိုင်းပစ္စည်း - ၁ ။ လူပျိုနှောင်ကြိုးစက္ကူ / နှစ်ဆနှောင်ကြိုး paper2 ။ အထူးစက္ကူ 3. Kraft စက္ကူ4...
လက်ရှိစက္ကူထုပ်ပိုးသေတ္တာများအတွက်စျေးကွက်မှာတော့ပို။ ပို။ ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်လာသည်။ ၀ ယ်ယူသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်ထုပ်ပိုးသည့်စက်ရုံတစ်ရုံကိုလွယ်ကူစွာရှာရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ထိရောက်သောစက္ကူ pa နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်လျှင် ...
ပထမအမျိုးအစား - ဘုတ်အဖွဲ့စာအုပ်အမည်အရဘုတ်ဘုတ်ကိုသစ်သားဘုတ်ကဲ့သို့အထူနှင့်မာကျောမှုရှိသည့်စာအုပ်ဟုနားလည်နိုင်သည်။ ဤစာအုပ်၏ထူးခြားချက်များ - ၁။ အရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကလေးသည်ကွဲရန်နှင့်ကွဲရန်မလွယ်ကူပါ၊ အကြိမ်ကြိမ်ကြည့်နိုင်သည်။ ၂ ။
မည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆိုအဆင့်သုံးဆင့်မြင့်သည်၊ အလတ်စားနှင့်အနိမ့်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များတွင်အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးသည်မတူညီသောထုပ်ပိုးမှုနည်းလမ်းများရှိသည်။ အဆင့်မြင့်ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာ၏အရည်အသွေးသည်အမြဲတမ်းသာလွန်နေမည်။ High-end လက်ဆောင်သေတ္တာထုပ်ပိုး high-end ထုပ်ပိုးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအနေအထားရှိပါတယ်။ အဲဒါ ...
တရုတ်နိုင်ငံ၏သေတ္တာများထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်လူမည်မျှရှိပါသနည်း။ ဤအချက်အလက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခွင့်အာဏာအရှိဆုံးသောအချက်အလက်များကို extrapolation မှတဆင့်သာမရနိုင်ပါ။ ပထမအချက်မှာပုံးများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအခြေခံစက္ကူ၊ တရုတ်၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုမှာတန်ချိန်သန်း ၅၀ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာပျမ်းမျှ PR ...
အစက်အပြောက်အရောင်မှင်များ၏ chromatic aberration အပေါ်စက္ကူစွမ်းဆောင်ရည်၏အချက်များသြဇာလွှမ်းမိုးမှု: 1. စက္ကူအဖြူရောင်ကွဲပြားခြားနားသောအဖြူရောင် (သို့မဟုတ်အချို့သောအရောင်နှင့်အတူ) စာတမ်းများပုံနှိပ်မှင်အလွှာ၏အရောင်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ တူညီသော whiteboard paper အတွက်အဖြူရောင်သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ထုပ်ပိုး box ကိုပုံနှိပ်ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှု
၎င်းသည်အသုံးပြုသူဖြစ်စေ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းကုမ္ပဏီဖြစ်စေဖြစ်စေထုပ်ပိုးသေတ္တာ၏စျေးနှုန်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာ၏ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်နည်းကိုနားလည်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူ၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းနိုင်ရုံသာမကကုမ္ပဏီ၏အမြတ်ကိုလည်းသေချာစေသည်။ အတွက် ...
၁။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် UV (Ultraviolet) သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုလည်းခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကုသမှုဟုခေါ်သည်။ glazing နည်းပညာသည်ပုံနှိပ်ထားသည့်အရာ၏ပုံပန်းသဏ္enhanceာန်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအရောင်များသည်ပိုမိုတောက်ပ။ အရောင်တောက်ပသည်။ ထို့အပြင်ပုံနှိပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
21-06-02 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
စက္ကူထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းများစက္ကူထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းများသည်စပျစ်ဝိုင်လုပ်ငန်းကို“ ထိခိုက်သည်” - တစ်ရက်လျှင်တစ်နေ့စျေးနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်လိုင်းလိုအပ်သည်မကြာသေးမီကတစ်နိုင်ငံလုံးရှိစက္ကူစျေးနှုန်းသည်တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်ခဲ့သည်! WBO ၏နားလည်မှုအရစျေးနှုန်းများကိုဝိုင်လုပ်ငန်းသို့ကူးစက်သွားသည်။ ဖြန့်ဖြူးသည် ...